शिविरभित्र १३ शिर्षकमा भ्रष्टाचार भएको तात्कालिन एक कमाण्डरको सनसनीपूर्ण खुलासा – JanaSanchar.com
संबाददाता : मोनिका गुरुङ	प्रकाशित मिति: (२०७३ कार्तिक १२, शुक्रबार) २०:१८
वि.सं. २०६३ मङ्सिर ५ मा जनयुद्धको समापनसँगै उसै दिनबाट जनमुक्ति सेनालाई देशका विभिन्न स्थानमा क्याम्प खडागरी राख्न शुरु गरियो । देशका विभिन्न स्थानहरुमा ७ ओटा शिविर जसलाई डिभिजन कार्यालय र २८ ओटा सहायक शिविर खडा गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य भयो । म शक्ति खोर शिविरमा कम्पनी कमाण्डरको हैसियतमा थिए । जसअन्तर्गत क्यान्टोनमेन्ट बसाईको सुरुवाती करिब एकबर्ष सारै कष्टकर रह्यो । जमिनमा खाल्डो खनेर माथिबाट प्लास्टिकको त्रिपाल टाँगेर, तराईको टन्टलापुर घाम, जुका आदी समस्या त छँदै थिए । ओड्ने, बिछ्याउने नहुँदा परालको साहारामा दिनरात काटिन्थ्यो ।
२०६३ मङ्सिर ५ बाट नै हाम्राे भरण पोषणको जिम्मा सरकारले लिसकेको थियो । तर, त्यो एकवर्ष भित्रको समयमा थुप्रै दिनरात आधा भोकै, आधा नाङ्गो रहँदै गुजारा चल्यो । हामीलाई जंगलमा गएर बस भनी पठाइयो । जाँदा घनघोर जंगल मात्रै देखियो । जति इलाका छुट्याइएको थियो तिनै इलाकामा ब्यबस्थित भएर बस्न करिव एक बर्ष नै लाग्यो । राती निदाइँरदा बेजोड बर्षातको असिनाले त्रिपाल च्यातेर निधारमा हिर्काउथ्यो, दिनमा उच्च्तम घामको तापले उत्तिकै सताउथ्यो । युद्ध अवस्थाको भन्दा कयौं गुणा कष्टकर र आसुमय रह्यो त्यो क्यान्टोनमेन्ट ।
नेपालको राज्य व्यवस्था परिवर्तन गरी अधिकार, समानता र विकासको निम्ति मुक्ती र मृत्युलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै ज्यान समेत दान गरेर परिवार, आफन्त कसैको पनि वास्तै नगरी निजी रहर, इच्छा, सपना, सुविधा सबै त्याग गरेर राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सुनौलो नेपालको लागि जनयुद्धमा लागेको थिएँ । तर, गन्तव्यमा अगाडि बढिरहेको बेला नै जनयुद्ध अन्त्यको घोषणा गरियो ।
जनयुद्धमा बगेको रगत र पसिनाबाट गणतन्त्र आयो । लिखित रुपमा किसान, मजदुर पनि रास्ट्र प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था ल्याइयो । जाति, भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रुपमा वा क्षेत्रमा सबैको समान पहुँच, अधिकार एवं स्वतन्त्रता हुनेगरी संघीय शासन प्रणालीमा जाने व्यवस्था आयो । नेपाली जनताको जीवन व्यवहारमा भने केही फरक आएन । हामी युद्ध लडेका र जनताको जीवन त्यही २०५२ साल भन्दा पहिलेकै जस्तै तर जनयुद्ध लडेका नेताहरुको जीवनमा आमूल परिवर्तन भयो । हामी जनताका छोराहरु बाबा बाजेले गर्दै आएको पेशामा फर्किन बाध्य भयौँ । सुनौलो सपना देखेर जनयुद्धमा हाम फालेको हामी अहिले बाच्नैको लागि विदेशीको गुलाम बन्नु परेको छ ।
जनयुद्धका कमाण्डरहरु द्वन्द्व समाधान गर्यौ भन्दैछन् तर उनका व्यवहारले द्वन्द्वको बिजारोपण गरिरहेको छ । सहिदमाथि व्यपार भइरहेको छ । जनमुक्ति सेनाका १२ सय सदस्यलाई समायोजन गर्यो भन्दै नाक फुलाउनेहरुले १८ हजारको अपमान भइरहेको कुरा थाहा छ कि छैन ? आफू योग्य भए र हामीलाई अयोग्य भन्दै विदेशीन बाध्य बनाए । जनमुक्ति सेनालाई नेताहरुले पैसा कमाउने साधन बनाए । सबैभन्दा ठूलो पैसा उनीहरुले शिविरमा रहँदाको समयमा कमाए ।
यसरी भयो शिविरमा घोटाला
स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरा नेतृत्वको सरकारले माओवादी लडाकुलाइ पकेट खर्च भनेर मासिक २ हजार दिने निर्णय गर्यो । हाम्रो लागि त्यो दुई हजार निकै ठूलो रकम थियो, किनकी हामीले जनयुद्धमा मासिक दुईबाट बढाएर पाँच सय बनाइएको थियो । वि.सं. २०६३ मङ्सिर ४ सम्म त्यही पाँच सयले मासिक गुजरा चलाएका थियौँ ।
क्यान्टोनमेन्ट बसाइको ६ महिना गुज्रेपछी गिरिजा सरकारको उक्त निर्णयले २ हजार मासिक खर्च र शान्ति मिसन अनमिनले एक हजार गरि जम्मा मासिक तीन हजार पकेट मनि तय गरियो । तर त्यो ३ हजारबाट पनि पार्टीले १ हजार कटौती गर्दथ्यो र हाम्रो हातमा दुई हजार दिइन्थ्उयो । पार्टीको लागि छुट्टयाइएको १ हजार रकम पार्टी संचालनका लागि भनिन्थ्यो । त्यसको हिसाब किताव कहाँ र कति गरियो तर कतै देखाइएन ।
१.अब हिसाब गरौ, ३१ हजार जनसेनाको प्रत्येक महिना १ हजारको दरले कटौती रकम ।
२. रासन भत्ता शिर्षकमा दैनिक प्रतिव्यक्ति बराबर ७२ रुपैयाँ दिइएको थियो । त्यसबाट पनि प्रतिव्यक्ति १२ रुपैयाँ कटौती ।
३. क्याम्प निर्माणका लागि ९० हजार रुपैयाँका दरले लिइन्थ्यो । जसमध्येबाट प्रतिघर निर्माण खर्च ३० देखि ४० हजार मात्र लागेको थियो । (प्रतिघर निर्माणमा हुने उक्त ३० देखि ४० हजारमा केवल किला काँटी, जस्ता पाता, औजार सामाग्रीमा मात्र खर्च हुन्थ्यो) । बाँकी अरु काठ निशुल्क, जनशक्ति निशुल्क, रुखका गिन्डा चिरे बापत चिरान मिललाइ रुखकै गिण्डा ज्याला दिइन्थ्यो ।
४. एउटा सहायक शिविरमा लगभग ६० घर बनाइएका थिए । सबै २८ वटा साहयक शिविर र ७ ओटा मुख्य शिविर गरी लगभग २ हजार ५ सय । प्रतिघर बराबर ६० देखि ७० हजार भ्रष्टाचार ।
५. पहिलो प्रमाणीकरणमा जनसेनाको संख्या सरदर ३१ हजार, प्रत्येकबाट मसिक १ हजारका दरले रकम कटौती ।
६. दोस्रो प्रमाणीकरणपछि १९ हजार ६ सय २ बाट पनि त्यसै गरि मासिक १ हजार रकम कटौती ।
७. दोस्रो पटक प्रमाणीकरणसम्म आउँदा लगभग ७ हजार जनसेनाले शिविर छोडिसकेका थिए । पलायन, भागेका, घर बसेका, बिदेश गएकाहरुबाट पुरै रकम जफत गरिन्थ्यो ।
८. सरकारले शिविर व्यवस्थापनमार्फत चेकद्वारा प्रत्यक दुईदुई महिनामा भरणपोषण रकम बितरण गरिन्थ्यो । वितरण गर्नु दुई दिन पुर्वनै शिविरमा नभएका अर्थात शिविर छोडेका जनसेनाको नाममा किर्ते हस्ताक्षर गरी रकम झिकिन्थ्यो ।
९. शिविरमा एक टीम तयार पारिन्थ्यो, जसले अनुपस्थित साथीहरुको नाममा किर्ते हस्ताक्षर गरि चेक तयार पाथ्र्यो । उक्त कार्य सम्पन्न भएको दुई दिनपछि शिबिर व्यवस्थापन समिति, जसमा सरकारी कर्मचारी, बैंक अधिकृत र हाम्रो तर्फबाट दुई जना भएको समितिले चेक बितरण गर्दथ्यो, जुन चेक बुझ्न शिबिरमा भएकाहरुबाट अनेक भेषधारण गरेर चेक बुझ्न लगाइन्थ्यो । उपस्थित एकको सरदर ७ जना अनुपस्थितको हामीले चेक बुझ्नु पर्दथ्यो । किर्ते हस्ताक्षरको पुरै रकम अत्तोपत्तो हुँदैनथ्यो ।
१०.सात जिल्लामा मुख्य ७ वटा र २८ सहायक शिबिर थिए । प्रत्येक दुईदुई महिनामा कटौती गरिने रकम जम्माजम्मी एउटा सहायक शिविरले १ करोड २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दथ्यो । उक्त रकम सबै शिविरबाटै संकलन हुन्थ्यो ।
११. शिविर निर्माणको लागि आवश्यक भन्दा बढी जंगल फडानी गरिन्थ्यो । उक्त काठ तस्करमार्फत बिक्री गरिन्थ्यो ।
१२. स्वास्थ उपचारमा आउने मासिक २० लाख, सामान्य औषिधी मात्रै गरिन्थ्यो ।
१३. शिविर निर्माणको भौतिक काम हामीले आफैले गर्ने गरेका थियौँ । श्रमिकको नाममा भएको खर्च शिविरमै रह्यो । त्यसको कुनै हिसाब किताव देखाइएन ।
आर्थिक हिनामिनाबारे हामी जानकार थियौँ । हिसाब–किताब खोज्न तल्लो तहमा समुह निर्माण हुन थाले । हाम्रो आवाजलाई बन्द गर्न शिविरभित्र गोली नै चलाइयो । विरोध गर्नेलाई दवाउन एक तहका कमरेडहरुको समूह नै बनाएको थियो । यसैबीच कथित सेना समायोजन गरियो । शिविरभित्रको छानविन कहिले हुन्छ ? कसले गर्छ ? हामी हेरेर बसेका छौं ।
(२०७३ कार्तिक १२, शुक्रबार) २०:१८ मा प्रकाशित